Zininzi iintlobo zamadigri. Yintoni efanelekileyo kuwe?
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zamadigri ngaphandle apho. Ukumisela okulungileyo kuwe kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyenza ngemfundo yakho. Iimigangatho ezithile zifunwa kwimisebenzi ethile- iidridi zonyango , umzekelo. Abanye baninzi ngokubanzi. I- Master's Degree kwi-Bhizinisi (MBA) yinqanaba eluncedo kwiindawo ezininzi, ezininzi. IsiGanga soBugcisa boBugcisa malunga naluphi na uqeqesho luyakunceda ufumane umsebenzi olungcono.
Batsho ihlabathi kunye nabaqeshi besikhathi esizayo ukuba unemfundo ehambelana ngokupheleleyo.
Kwaye abanye abantu bakhetha ukufumana iidridi ezizokwakheka ngokwabo, okanye ngenxa yokuba banomdla wesifundo esithile okanye isiyalo. Abanye ogqirha befilosofi (Ph.D.) bawela kule candelo. Ukugxininisa apha kukunye.
Ngoko ke ukhetha ntoni? Kukho izatifikethi, iilayisenisi, iidanga zee-grade, kunye needridi ezigqityiweyo, ngamanye amaxesha zibizwa ngokuba zii-post-graduate degrees. Siza kujonga kwiqela ngalinye.
Iziqinisekiso kunye neelayisensi
Isitifiketi sobugcisa kunye neelayisenisi, kwimihlaba ethile, into efanayo. Kwabanye, akunjalo, kwaye uya kuyifumana isicatshulwa esishushu kwiindawo ezithile. Iimpawu ezininzi kakhulu ukuba zingakhankanywe kule nqaku, ke qiniseka ukuba uphando kwintsimi yakho kwaye uqonde ukuba yiyiphi oyifunayo, isitifiketi okanye ilayisenisi. Unokwenza oku ngokukhangela i-intanethi, ukutyelela ilayibrari yakho yendawo okanye iyunivesithi, okanye ucele uchwepheshe kwintsimi.
Ngokubanzi, izatifikethi kunye neelayisensi zithatha malunga neminyaka emibini ukufumana, kwaye uxelele abaqeshi nabathengi ukuba uyazi into oyenzayo. Xa uqesha umbane, umzekelo, ufuna ukwazi ukuba banemvume kunye nokuba umsebenzi abakwenzelayo uya kuchaneka, ukukhuphela kwaye ukhuselekile.
Igama elithi "igraduate" libandakanya ezo degrees ozifumanayo emva kwe- diploma yesikolo esiphakeme okanye i-GED yobungqina kunye nangaphambi kwe-Master okanye uDktr .
Ngamanye amaxesha kuthiwa yi-postsecondari. Amaklasi angathathwa nakweyiphi na iindidi ezahlukeneyo zeekholeji neeyunivesithi, kubandakanywa neeyunivesithi ze-intanethi.
Kukho ezimbini iindidi eziqhelekileyo zeegraduate degrees, iiDegrees of Degrees kunye neDachelor's Degrees.
Amagqabantshintshi aMaqabane adla ngokufumana iminyaka emibili, ngokuqhelekileyo kwindawo yoluntu okanye kwiikholeji zezobugcisa, kwaye ngokubanzi zifuna iikredithi ezingama-60. Iinkqubo ziyahluka. Abafundi abafumana iSigqibo seNxulumano ngamanye amaxesha benze njalo ukuze banqume ukuba indlela abayikhethileyo ichanekile kubo. Iikhredithi zinokuhlawula imali encinci kwaye idla ngokugqithiselwa kwiikholeji leminyaka emine ukuba umfundi ukhetha ukuqhubeka nemfundo.
UbuNxulumene noBugcisa (AA) yinkqubo yobuninzi bobugcisa obubandakanya uphando ngeelwimi, imathematika, isayensi , isayensi yoluntu kunye noluntu. Ummandla ophezulu wokufunda udlalwa ngokuthi "uMbutho woBugcisa bobuGcisa ngesiNgesi," okanye uLonxibelelwano okanye nayiphi na indawo yokufunda isifundo somfundi.
I-Associate yeSayensi (AS) yiprogram yezobuqhophololo ngokugxininisa ngakumbi kwimathematika nakwizesayensi. Indawo ebalulekileyo yophando ibonakaliswe apha ngendlela efanayo, "Udibaniso lweNzululwazi kwi-Nursing."
Umhlobo we-Applied Science (AAS) ugxininisa ngakumbi kwindlela ethile yomsebenzi.
Iingxowa-mali azivumi ukudluliselwa kwiikholeji zeminyaka emine, kodwa umhlobo uya kulungelelanisa umsebenzi wezinga lokungena kwiindawo ezikhethiweyo. Umsebenzi uchazwe apha ngokuthi, "Udibene ne-Applied Science kwi-Decor Decor".
Iziganga ze-Bachelor zifumana ezine, kwaye ngamanye amahlanu, iminyaka, ngokuqhelekileyo kwiikholejini okanye kwiyunivesiti, kuquka iikoleji ze-intanethi.
I-Bachelor yoBugcisa (BA) igxininise ekucingeni okucwangcisiweyo kunye nokunxibelelana kwiindawo ezahlukeneyo zobugcisa be-liberal, kubandakanywa iilwimi, izibalo, isayensi, isayensi yoluntu kunye noluntu. Izikhulu zingaphantsi kwezifundo ezinjengeMbali, isiNgesi, i-Sociology, ifilosofi, okanye inkolo, nangona kukho abanye abaninzi.
I-Bachelor yeSayensi (BS) ijolise ekucingeni okubalulekileyo, kwakhona, ngokugxininisa kwizesayensi ezifana ne-teknoloji kunye neyeza. I-Majors ingaba kwiFizikiki, iKhemistry, i-Biology, i-Nursing, i-Economics okanye i-Mechanical Engineering, nangona kunjalo, kukho nabanye abaninzi.
Kukho ezimbini iindidi eziqhelekileyo zezidanga ze-postgraduate, ezibhekiswe kwiidridi zezifundo.
Iigrari zeMatitshala zivame ukufumana enye kwiminyaka okanye ngaphezulu kuncike kwintsimi yokufunda. Ngokuqhelekileyo bafuna ukuphucula ubuchule bomntu kwintsimi yabo, kwaye ngokuqhelekileyo bafumana umvuzo ophezulu. Iintlobo ezimbalwa zeeDrama zeMatriki:
I-Master of Arts (MA)
I-Master of Sciences (MS)
I-Master of Fine Arts (MFA)
Ngokugqithiseleyo oogqirha bathabatha iminyaka emithathu okanye ngaphezulu ngokuxhomekeke kwintsimi yokufunda. Kukho oogqirha abaqeqeshiweyo, ezimbalwa zazo:
Ugqirha wezeMpilo (MD)
Ugqirha weMfuyo yeMfuyo (DVM)
Ugqirha wezoBulungisa (JD) okanye uMthetho
Kukho noogqirha ophando, owaziwa ngokuba nguDokotela we-Philosophy (PhD), kunye noogqirha abahloniphekileyo, banikezelwa ngokubaluleka kwegalelo elikhulu kwintsimi.
"Umoya Ushintsho" kaHarold Macmillan
I-Gray's Anatomy Isikhathi 1: Abalinganiswa abalulekileyo
Yiyiphi i-Niqab ehlanjwe ngabasetyhini abaseSilamsi?
Isimemezelo esisemthethweni sokuQiniswa kweeNkcazo